2 Siyaabaha Waraaqda iPhone Xiriirada in vCard / VCF on PC ama Mac
> Resource > iPhone > Sidee Macdan iPhone Xiriirada in vCard / VCF
Si joogto ah u taageero aad xiriirada iPhone waa caado wanaagsan. Marnaba ma waayi doono oo dhan aad xiriirka la leedahay in kiiskaaga iPhone uu lumo ama la jebiyey. Waxaan ognahay in Lugood samayn karaa hayaan marka aan u hagaagsan iPhone leh waxaa ( ka heli basaasa gurmad Lugood ). Laakiin, faylka gurmad waa geli karin, oo ma ogola in aad si ay u akhriyaan si kasta. Haddii aad soo saaro karaa iPhone xiriirada si VCF / vCard, waxaad si fudud ka akhrisan kartaa oo saxaa.
Si aad u soo saaro xiriirada iPhone sida vCard (VCF) file, waxaad isku dayi kartaa labada qalab. Mid ka mid ah aalad waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) ama Wondershare Dr.Fone (iPhone Data Recovery for Mac) . Waxaa Qeybaha xiriirada ka iPhone ama gurmad Lugood in a File VCF / vCard. Qalab kale waa Wondershare TunesGo (Windows), kaas oo sidoo kale awood u aad Macdan xiriirada on iPhone in file vCard. Ka sokow, qalab Qeybaha xiriirada in Outlook, Windows Cinwaankaaga Book, Windows Live Mail.
Xalka 1: Waraaqda iPhone xiriirada si vCard File la Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac)
Xalka 2: xiriirada Macdan iPhone in VCF la TunesGo
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows), ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ogolaado in aad si toos ah Macdan iPhone xiriirada si vCard / VCF, ama xiriirada laga soo qaatay iPhone gurmad si vCard / VCF. Xiriirada aad u doonaa in aan la bedelin ama xusuustay.
Qeybta 1: Waraaqda iPhone xiriirada si VCF / vCard kaga imaanayo Lugood
Qeybta 2: xiriirada Macdan iPhone in vCard / VCF File
Qeybta 1: Waraaqda iPhone xiriirada si vCard / VCF kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Dooro gurmad iPhone in uu soo saaro
Si aad u soo saaro iPhone gurmad xiriiro, waxaad u baahan tahay in aad u hagaagsan iPhone la Lugood hore. Markaas ordi barnaamijka oo taga inuu ka soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda. Halkan aad iPhone gurmad files la marsiiyey doonaa oo ku qoran. Mid ka mid ah oo leh taariikhda cusub Dooro iyo riix Start Scan si ay u soo saaro.
In ka badan xiriirada, dhammaan waxa ku jira in gurmad la soo saaro doonaa baaritaan ka dib. Waxaad iyaga oo dhan ku eegaan karaa natiijada scan hoos ku qoran. Hubi aad xiriirka la leedahay oo guji bogsadaan. Waxaad iyaga ku badbaadin karaan sida vCard / file a VCF on your computer. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka Oo weliba, kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro xiriirada iPhone sida CSV ama file HTML.
Tallaabada 1. baarista iPhone xiriirada
Haddii aadan rabin in aad isticmaasho gurmad Lugood, waxaad isticmaali kartaa sidan si toos ah Macdan xiriirada ka iPhone in file vCard / VCF ah. Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan iPhone in computer ka oo ay maamulaan barnaamijka. Barnaamijku wuxuu idin soo bandhigi doonaan daaqad hoos ku qoran.
Wixii iPhone 5 / 4s: Riix Start Scan si toos ah baarista iPhone xiriirada ku yaal.
Wixii iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in marka hore, dabadeedna raac tilmaanta si ay u soo galaan hab iskaanka telefoonka ee:
3. Fur button Power iyo sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi, ilaa aad ka hesho hab iskaanka ah.
Ka dib markii in, Wondershare Dr.Fone ee macruufka si toos ah iskaan doonaa iPhone xogta ku yaal iyo kuwa tirtiray dhawaan.
Tallaabada 2. xiriirada Macdan iPhone in vCard / file VCF
Scan ka dib, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta la helay ka iPhone, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, sawiro, qoraalo, iwm Hubi kuwa aad rabto oo guji bogsadaan. Waxaad si vCard / file a VCF on your computer Macdan karo xiriirada iPhone aad hadda.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad kala xiriir tirtiray, waxaad isticmaali kartaa button slide ee ugu sareysa si ay "u soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo kaliya".
Download ku version DHAGAYSIGA FREE hoose si aad u qaadato isku day ah.
Iyadoo TunesGo Wondershare, waxa kale oo aad soo saaro karo xiriirada ka iPhone sida file VCF. Markaas, aad sidoo kale kartaa file VCF ku on your computer, ama geliyaan xisaabaha qaar ka mid ah, sida Gmail. Haddii aad leedahay xiriir badan oo nuqul ku saabsan iPhone, waxaad iyaga ku milmaan karaa ka hor soo saarida.
Download TunesGo on your computer iyo waxa ay haatan isku dayaan.
Wondershare TunesGo taageertaa iPhone 5, iPhone 3GS, iPhone 4 iyo iPhone 4s macruufka socda 5 iyo macruufka 6. Halkan, waxaad ka heli kartaa detailes dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha Apple oo ay taageerayaan iyo shuruudaha nidaamka .
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan TunesGo
Bilowga, rakibi iyo abuurtaan TunesGo on your computer. Markaas, waxaad arki doontaa suuqa kala tan hoos ku qoran.
Tallaabada 2. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka
Markaas, xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB la socota iPhone. Marka aad iPhone xiran yahay, qalab this waxaa lagu ogaan doonaa ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa laga bilaabo.
Tallaabada 3. iPhone Warbixiinta xiriiro sida VCF
Hadda, galeeysid bidix, guji "Xiriirada". Haddii aad qortey xisaab adiga ku iPhone, sida iCloud, Exchange iyo Yahoo !, xiriirada ku saabsan xisaabaadka, kuwaas oo la soo bandhigi doonaa "Xiriirada" category. Xulo doortaan xiriirada ama dooran dhammaan dadka ay khuseyso. Guji "Import / Dhoofinta".
Markaas, menu jiido-hoos u soo booda. Sida laga soo xigtay in aad doorato, guji "Dhoofinta soo xulay Xiriirada" ama "dhoofinta Dhammaan Xiriirada". Ka dib markii la jiido kale menu-hoos u muuqataa, waa in aad doorato "in Multiple vCard Faylal ay" ama "in la vCard File Single". Browser computer aad ilaa aad ka heshid meel ku kaydiso file vCard ah (s).
Ka sokow soo saarida xiriirada iPhone in files vCard, waxaad iyaga saaro karaa in Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail.
Isku day TunesGo Wondershare Macdan xiriirada iPhone in vCard!